Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Neoteny sy Paedogenesis | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Neoteny sy Paedogenesis | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Neoteny sy Paedogenesis
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny neoteny sy ny paedogenesis dia ny neoteny ny dingan'ny fanemorana ny fivoaran'ny fisiolojian'ny zavamiaina, raha ny paedogenesis kosa dia ny fizotran'ny zavamiaina izay tsy nahatratra fahamatorana ara-batana.
Ny Paomerorphism dia ny fitazonana ny toetran'ny olon-dehibe iray izay hita teo amin'ny tanora teo aloha. Paomerorphism dia karazana heterochrony. Izy io dia lohahevitra manokana amin'ny sehatry ny biolojia fampandrosoana. Misy fomba roa hanatanterahana ny paomorphism: neoteny sy paedogenesis. Amin'ny neoteny, ny fivoaran'ny fisiolojian'ny zavamananaina iray dia nahemotra, raha amin'ny paedogenesis kosa dia haingana kokoa ny fivelarana ara-nofo.
2. Inona no atao hoe Neoteny
3. Inona no atao hoe Paedogenesis
4. Fitoviana - Neoteny sy Paedogenesis
5. Neoteny vs Paedogenesis amin'ny endrika Tabular
6. Famintinana - Neoteny vs Paedogenesis
Inona no atao hoe Neoteny?
Neoteny dia dingan'ny fanemorana ny fivoaran'ny fisiolojian'ny zavamiaina. Antsoina koa hoe juvenilization izy io . Ity dingana ity dia mampiadana ny fivoaran'ny zavamiaina iray. Matetika izy io dia hita amin'ny biby sy ny olombelona maoderina. Neoteny sy paedogenesis dia karazana paomiorphism roa. Paomerorphism dia karazana heterochrony. Ny fitazonana ny olon-dehibe ny toetra izay hita taloha tamin'ny tanora. Amin'ny biolojian'ny fivoarana, ny fiainana any an-trano ary ny biolojika momba ny fivoarana, dia zava-dehibe izany fitehirizana izany. Ny mpahay siansa sasany dia mamaritra ny atao hoe paomorphism ho toy ny fihazonana ireo toetra lavanila amin'ny olon-dehibe, toy ny hita amin'ny salamanders .
Sary 01: Neoteny
Julius Kollmann no namorona io teny io. Tamin'ny taona 1926, Louis Bolk dia nilazalaza ny neoteny ho dingana lehibe amin'ny fanabeazana ny olona. Ny neoteny amin'ny olombelona dia ny fihemorana na fanemorana ny fivoaran'ny vatana raha oharina amin'ny primata tsy olona. Izy io dia miteraka fiasa toy ny loha lehibe, tarehy fisaka ary sandry somary fohy. Na izany aza, ny olombelona koa dia manana toetra tsy neotenika (peramorphic) toy ny orona lehibe sy tongotra lava. Ankoatr'izay, ny neoteny dia misy ihany koa amin'ny biby fiompy toy ny alika sy totozy. Izany dia satria manana loharanom-pahalalana bebe kokoa izy ireo ary tsy dia mifaninana amin'ireo loharano ireo, mamela azy ireo ho matotra sy hiteraka haingana kokoa noho ny mpiara-dia aminy.
Inona no atao hoe Paedogenesis?
Paedogenesis dia dingan'ny fiterahana amin'ny zavamananaina izay tsy nahatratra fahamatorana ara-batana. Raha ny marina dia mekanika mifandraika amin'ny paomerorphism izy io. Resahina indrindra amin'ny biolojia fampandrosoana. Ny paedogenesis dia azo faritana ho toy ny fahazoana ny fahamatorana ara-nofo amin'ny zavamananaina iray eo amin'ny sehatra misy azy na zaza tsy ampy taona. Ireo zavamiaina mampiseho paedogenesis dia tsy mahatratra ny endrika olon-dehibe niainan'ireo razamben'izy ireo taloha.
Sary 02: Paedogenesis
Ny Paedogenesis dia mitranga indrindra noho ny toe-piainana eo amin'ny tontolo iainana toy ny maripana ambany, ny tsy fahampian'ny iode izay mitarika ho amin'ny fihenan'ny tiroidan'ny tiroida sns. Ireo fepetra ara-tontolo iainana ireo dia manakana ny metamorphosis . Raha mihatsara ny tontolon'ny tontolo iainana dia azo avadika ny paedogenesis. Ity fotokevitra biolojika ity dia misy amfibiana sasany sy bibikely sasany. Ankoatr'izay, izy io dia mitranga ihany koa amin'ny vehivavy misy voangory, strepsiptera, valizy, ary afovoan-tsofina.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny Neoteny sy Paedogenesis?
Ny neoteny sy ny paedogenesis dia fomba roa isehoan'ny paomerorphism ao anaty zavamananaina.
Ny neoteny sy ny paedogenesis dia misy ifandraisany amin'ny biolojia fampandrosoana.
Ireo dingana ireo dia vokatry ny fiovan'ny heterochronic.
Ireo dingana roa ireo dia manakana ny metamorphosis mahazatra.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Neoteny sy Paedogenesis?
Neoteny dia dingan'ny fanemorana ny fivoaran'ny fisiolojian'ny zavamiaina. Mifanohitra amin'izany, ny paedogenesis dia fizotry ny fiterahana amin'ny zavamananaina izay tsy nahatratra fahamatorana ara-batana. Ka io no mahasamihafa indrindra ny neoteny sy ny paedogenesis. Ankoatr'izay, amin'ny neoteny, ny fampandrosoana ara-batana ny zavamananaina iray dia tara, raha amin'ny paedogenesis kosa dia mipoitra haingana ny fivelarana ara-nofo.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ireo fahasamihafana misy eo amin'ny neoteny sy paedogenesis amin'ny endrika tabilaoro raha ampitahaina.
Famintinana - Neoteny vs Paedogenesis
Paomerorphism dia karazana heterochrony izay miteraka ny fitazonana ny toetran'ny olon-dehibe iray izay efa hitan'ny tanora teo aloha. Ny neoteny sy paedogenesis dia fomba roa hampiroboroboana ny paomerorphism ao anaty zavamiaina. Ny Neoteny dia dingan'ny fanemorana ny fivoaran'ny fisiolojian'ny zavamiaina iray, raha ny paedogenesis kosa dia mamaritra ny fiterahana iray avy amin'ny zavamiaina izay tsy nahatratra fahamatorana ara-batana. Noho izany, ity no fahasamihafana lehibe eo amin'ny neoteny sy ny paedogenesis.
1. “ Neoteny .” Topimaso iray | Lohahevitra momba ny siansa.
2. " Paedogenesis ." Topimaso iray | Lohahevitra momba ny siansa.
1. " Neoteny " Nosoratan'i Mchavez - Asa manokana (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia
2. “ Notophthalmus perstriatus: Striped Newt ” Nosoratan'i Todd Pierson (CC BY-NC-SA 2.0) avy amin'i Flickr
Fahasamihafana eo amin'ny biodegradable sy ny compostable Fahasamihafana eo amin'ny lalan'ny intrinsika sy ny Extrinsika amin'ny fifonan'ny ra Fahasamihafana eo amin'ny micropropagation sy ny Somatic Cell Hybridisation Fahasamihafana eo amin'i Chyle sy Chyme Fahasamihafana eo amin'ny Oligodendrocytes sy ny Schwann Cells
Fahasamihafana eo amin'ny Spectroscopy amin'ny emission flame sy ny spectroscopy atomika
Fahasamihafana eo amin'ny pH sy pOH
Fahasamihafana eo amin'ny tile ceramic sy porcelain
Fahasamihafana eo amin'ny fitantanana ny tetikasa sy ny fitantanana ny asa
Fahasamihafana eo amin'ny Angina sy ny myocardial infarction
Copyright © 2010-2018 Fahasamihafana . Zo rehetra voatokana. Fepetra fampiasana sy politika momba ny fiainana manokana: ara-dalàna .